Susa imininingwane ngokuphepha ngokususa okuphephile | Kusuka kuLinux
Susa imininingwane ngokuphepha ngokususa okuvikelekile
U-Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | I-GNU / Linux, Kunconyiwe, Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko
Kulabo abanjengami abahlanya futhi abafuna ukususa imininingwane kusistimu yabo ngendlela engatholakali (noma cishe), nasi isixazululo.
Masifake iphakethe: vikela-susa
Ngemuva kwalokho kuzokwanela ukusebenzisa umyalo srm futhi izosusa umkhombandlela noma ifayili esifuna ngokuphepha.
Okulula. Lapho sivame ukususa okuthile kusistimu yethu, empeleni leyo mininingwane ayizange isuswe, kepha kwi-HDD "kwakhonjiswa" ukuthi imikhakha ethatha le datha 'ayinalutho', lapho-ke lapho sikopisha okuthile okusha kwi-HDD yethu ngokuhamba kwesikhathi, kancane kancane Kuncane okususwa ngempela kulwazi olukulezo zingxenye ezikhonjiswe noma zamakwa ngaphambili.
Yebo, okwenziwa yi-srm ukususa leyo mininingwane njengoba sijwayele ukuyenza, kepha hhayi lokhu kuphela, kepha kuyabhala futhi kususe kaningi esikhaleni esifanayo lapho imininingwane esusiwe ihlala khona, okungukuthi, isusa futhi ibhale, isuse futhi ibhale, ngale ndlela kwenza kube cishe kungenzekingaphandle kokuthi banemishini ekhethekile efana neCIA, FBI, NSA, njll. haha) kuzuzwe ukuthola imininingwane esusiwe.
Isibonelo, ukususa ifayela kungaba:
Uma ngifuna ukususa ifolda nakho konke okuqukethwe kwayo:
Lokhu ngiyakucacisa, kuzothatha isikhathi eside, kepha kukude kakhulu kunokujwayelekile. Khumbula ukuthi ibhaliwe futhi isuliwe kaningana, kusobala ukuthi lokhu kuzothatha isikhathi esiningi kunokujwayelekile. Kepha kunjalo ... uma okuthile kufuna okuthile kuyamkhokhela, uma sifuna ukuqeda imininingwane ngokuphepha ngangokunokwenzeka, kuzothatha isikhathi 😉
Kodwa-ke, uma ufuna ukuthi kuthathe isikhathi esincane, ungasebenzisa ipharamitha -l Lokhu okwenzayo ukuthi izobhalwa futhi isulwe kabili kuphela, izokwenza inqubo yokusula isheshe kepha ngeke ivikeleke njengokuzenzakalelayo.
Noma kunjalo, angicabangi ukuthi kukhona okuningi ongangeza.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Susa imininingwane ngokuphepha ngokususa okuvikelekile
Amazwana ayi-15, shiya okwakho
I-hard hard disk ewela ezandleni zakho .. Ngabe ucabanga ukuthi ukucisha ukubhala izikhathi eziningi emkhakheni ofanayo kuhle? Umama wami .. xDD
Kepha eziphuthumayo ...
Manje sengiyaqonda ukuthi kungani kuqhume amadrayivu amaningi, hahaha. Into efana nalena azoyenza kwabampofu. o_O
Nginikeza izinketho, umsebenzisi ukhululekile ukukhetha ukuthi uzosebenzisa noma cha
Uma ungafuni ukuthi ifayela litholakale, kufanelekile
Uyazi ukuthi ubhale kangaki emikhakheni efanayo yediski yakho? Noma ucabanga ukuthi idiski yakho ayinamkhawulo futhi ayikaze ibhale ngaphezulu imikhakha?
Ukuthakazelisa uhlelo, angazanga. Kuze kube manje ngisebenzise i-Bleachbit noma i-Shred efanayo ekuvumela ukuthi ukhethe inani lezikhathi zokubhala ngaphezulu ifayela, manje sesinenye inketho yokuthi i-CIA ibize umnyango xDD
Ukuphela kwendlela yokusula ngokuphepha (Futhi lokho okwamanje) ukubhujiswa ngokomzimba.
Ukubhujiswa ngokomzimba ngokusobala kuyindlela ephephe kunazo zonke, manje kungaba ukusebenzisa izindlela ezinconywe ngochwepheshe noma i-DoD akunakwenzeka ukuthola imininingwane efanelekile, ngethemba lokuthi izingcezu ezihlukanisiwe ngaphandle kokuthi zihambisana nolunye uhlobo lokuhlola noma idatha kuphela ngeke azinanani.
* akunakwenzeka ngokungenakwenzeka hahahaha: i-facepalm:
Anginayo imali eyanele yokuthenga i-hard drive njalo lapho ngifuna ukufihla amaphutha ami 0.o
Ndoda, ngalokho kukhona ubuchwepheshe bokubethela, khona lapha kukhona izindatshana ezinhle ngale ndaba.
Ungabhala kabusha yonke i-hard drive ngemininingwane engahleliwe
Isisetshenziswa esihle, mhlawumbe igama lePosi kufanele lithi "Susa amafayela unomphela"
Ngoba i- "safe" ihlobene, i-hard hard drive. XD.
Ngicabanga ukuthi akudingekile, eminyakeni edlule bekukhona umyalo obizwa ngokuthi yi-shred.
$ shred -u kudlula.txt
Uma u-paranoid ngaphezulu:
Uke wafunda i- $ man shred?
Ikusho ngokusobala ukuthi ezinhlelweni zesimanje zamafayela ingabhala ngaphezulu kukheli elihlukile lefayela elizosuswa, futhi phakathi kokunye icacisa i-ext3, ngakho-ke ngicabanga ukuthi ku-ext4 ngenxa yokufana kwayo ngeke iqinisekise ukusebenza noma.
Uma usebenzisa ithuluzi elinjalo kungenxa yokuthi ufuna ukuqiniseka ukuthi amakheli afanele omzimba ayasuswa futhi abhalwe phansi, ngakho-ke akusizi ngalutho kulezi zinsuku, ngaphandle kokuthi usebenzise amasistimu wefayela aphelelwe yisikhathi afana ne-fat32, ext2, njll.
Izinyathelo ezimbili zokufinyelela komsebenzisi ku-Ubuntu usebenzisa i-Google Authenticator
Kutholakala ukulanda iFirefox 20